MCC जनताको अनुमति बिना पास गरे कुनै नेता जिउदो रहदैंनन् एक एक गरी गो’ली हान्छौ: प्रधानसेनापति शर्मा – Cn Chautari
MCC जनताको अनुमति बिना पास गरे कुनै नेता जिउदो रहदैंनन् एक एक गरी गो’ली हान्छौ: प्रधानसेनापति शर्मा
माघ २१, २०७८ शुक्रबार 194
संकटको अवस्था ।
देखापरेका बेलामा प्रधानसेनापती प्रभुराम शर्माले अर्थपुर्ण अभिव्यक्ती दिएका छन्। नेपाल देशको रक्षाका लागी नेपाली सेना कटिबद्ध भएको भन्दै शर्माले कहिँ कतैबाट पनि देश माथी खतरा भएमा सेनाले जस्तो सुकै कदम चाल्न ।
पनि तयार रहेकोबताएका छन्। सेना प्रति नागरिकको विश्वास गुम्न नदिने प्रतिवद्धता पनि प्रधानसेनापति शर्माले गरेका छन्। बुधबार मकवानपुरको ऐतिहासिक चिसापानी गढीको संरक्षण पूर्वाधार निर्माणकार्यको शिलान्यास गर्दै ।
शर्माले चिसापानी गढी पहिले पनि सामरिक (युद्धको)रुपमा महत्वपूर्ण रहेको र अहिले पनि महत्वपूर्ण भएको बताए। आवश्यक भएको समयमा पनि सुरक्षा फौजको अंगहरु चिसापानी गढीमा आएर बस्न सक्ने” भन्दै ।
स्थानीयको भूमिका र सहयोगको अपेक्षा समेत शर्माले गरे महत्व पूर्ण गढीहरुको संरक्षण”“नगरेइतिहासको धरोहरहरु लोप हुदै जाने उनको भनाई थियो। नेपाली सेनाले मकवानपुर को चिसापानी गढीको संरक्षणको लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रधानसेनापति शर्माले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे यो गढीको
PrevMCC उपाध्यक्ष भन्छिन गरिब देशले 59 अर्ब देखेको पनि छैन र दिए पनि पच्दैन !
Nextप्रचण्ड पुत्री मेयर रेणुले कसैले कल्पना नगरेकाे काम गरेपछि कट्टर विराेधी ज्ञाणेन्द्र शाही नै चकित
पल शाह होइन, अब गायिका र दुर्गेशहरू जेल जाने पक्का
तपाईं जग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? ऋण लागेको हुनाले बेच्न लागेको मात्र २०’ हजार कठहा
भ’र्खरै म’न्त्रीमा थी ब’ म प्र’हा’र, अ’वस्था गं’म्भि’र!भिडियो सहित्त हेर्नुहोस